Akhriso: Magacyada Xildhibaanada maanta lagu doortay Baydhabo – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Illaa iyo shan xildhibaan oo cusub, ayaa lagu doortey magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Tartankii ugu danbeeyey ee dhacey gelinkii danbe maanta waxaa kusoo baxey Maxamed Aadan Maxamed, isagoo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 156 ee xubinnimada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wuxuu helay 88 cod, halka murashaxii la tartamayey Maxamed Ibraahim Isaaq uu helay toban cod. Waxaa halaabey laba cod.
Kursigii kan ka horeeyee ee loo tartamey waxaa ku guuleystay Maxamed Wardheere Cabdi, wuxuu helay codad gaaraya 83 cod, halka murashaxii la tartamayey Cabdullaahi Samow Cusmaan uu helay 11 cod, hal codna wuu halaabey.
Tartan kale oo loo galay kursi kamid ah kuraasta golaha Shacabka, waxaa ku guuleystay Maxamed Mursal Maxamuud. Waxaa uu helay codad gaaraya 73 cod, wuxuu ka guuleystay murashaxii la tartamayey oo helay isna 26 cod, iyadoo uu halaabey hal cod, sida ay sheegeen guddiga hirgalinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed.
Kursi kale oo lagu tartamey Shariif Maxamed Cabdullaahi ayaa kusoo laabtey xubinnimada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kadib markii uu ka helay 79 cod ergadii codeysay, halka murashaxii la tartamayey Maxamed Xuseen Mukhtaar uu helay 19 cod, waxaa halaabey 3 cod.
Gelinkii horana waxaa doorashada xildhibaanimo kusoo baxey Xasan Cabdulnuur Cabdi, oo kal hore ku fadhiyey kursigan, wuxuuna ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay #184 ee xubinnimada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka, wuxuu helay 72 cod, halka murashaxii la tartamayey uu helay Maxamed Cabdullaahi Cali 27 cod. Sidaasi ayuu mar kale Xasan Cabdul Nuur uga mid noqdey Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka ee cusub.